i-spaCy, umtapo wolwazi wokucubungula ulimi lwemvelo | Kusuka kuLinux
i-spaCy, umtapo wolwazi wokucubungula ulimi wemvelo
Okuhle | | Kunconyiwe
I-AI yokuqhuma iveze ukwethulwa kwe- inguqulo entsha yelabhulali yamahhala «I-SpaCy»Okusebenza kwe ukucubungula izilimi zemvelo (NLP). Ngokwenzayo, iphrojekthi ingasetshenziselwa ukwakha abaphendula ngokuzenzakalela, ama-bots, ama-classified classifiers, nezinhlelo ezahlukahlukene zezingxoxo ezinquma incazelo yemishwana.
Umtapo Wezincwadi yakhelwe ukuhlinzeka nge-API ephikelelayo Akuxhunywanga kuma-algorithm asetshenzisiwe futhi alungele ukusetshenziswa kwimikhiqizo yangempela. Umtapo Wezincwadi isebenzisa intuthuko yakamuva ku-NLP nama-algorithms asebenza kahle kakhulu etholakalayo ukucubungula ulwazi.
Uma kuvela i-algorithm esebenza kahle kakhulu, umtapo wezincwadi udluliswa kuwo, kepha lolu shintsho aluthinti i-API noma izinhlelo zokusebenza.
Isici se-spaCy futhi kuyisakhiwo esenzelwe ukucubungula amadokhumende aphelele, ngaphandle kokuqhubekisela phambili kuma-prerocessor ahlukanisa idokhumenti ibe yimishwana. Amamodeli anikezwa ngezinhlobo ezimbili: ukukhiqiza okuphezulu nokunemba okuphezulu.
Izici eziyinhloko ze-spaCy:
Ukusekelwa kwezilimi ezingaba ngu-60.
Amamodeli asevele aqeqeshiwe atholakala ngezilimi ezahlukahlukene kanye nokusetshenziswa.
Ukufunda okuningi kusetshenziswa abaguquli abaqeqeshwe phambilini njengeBERT (Bidirectional Encoder Renderings of Transformers).
Ukusekelwa kwamaveketha aqeqeshwe ngaphambilini nokushumeka kwamagama.
Ukulungele ukusebenzisa imodeli yohlelo lokuqeqesha emsebenzini.
Amathokheni agqugquzelwa ngokolimi.
Izinto ezilungele ukusetshenziswa ziyatholakala ukuxhumanisa izinhlangano eziqanjwe ngamagama, ukumaka izingxenye zenkulumo, ukuhlukanisa umbhalo, ukuhlaziya ukuncika okususelwa kumaki, ukwahlukanisa imisho, ukumaka izingxenye zenkulumo, ukuhlaziywa kwe-morphological, stemming, njll.
Ukusekelwa kokunwebisa ukusebenza ngezakhi nezimpawu ngokwezifiso.
Ukusekela ukudala amamodeli wakho ngokususelwa kuPyTorch, TensorFlow nakwezinye izinhlaka.
Amathuluzi awakhelwe ngaphakathi we-Named Entity Binding and Syntax Visualization (NER, Named Entity Recognition).
Inqubo elula yokupakisha nokuhambisa amamodeli nokuphatha ukuhamba komsebenzi.
Umtapo Wezincwadi ibhalwe ePython enezinto eziseCython, isandiso sePython esivumela ukusebenza okuqondile ukubiza ngolimi lwe-C.
Ikhodi yephrojekthi isatshalaliswa ngaphansi kwelayisense ye-MIT. Izinhlobo zolimi sezilungele izilimi ezingama-58.
Mayelana nenguqulo entsha ye-spaCy 3.0
Uhlobo lwe-spaCy 3.0 luvelela ukusetshenziswa kwe- imindeni eyisibonelo waqeqeshwa kabusha ngezilimi eziyi-18 futhi Kuqeqeshwe amapayipi angama-59 esewonke, kufaka phakathi amapayipi ama-5 amasha asuselwa ku-transformer
Imodeli inikezwa ngezinhlobo ezintathu (16 MB, 41 MB - ama-vectors ayizinkulungwane ezingama-20 kanye nama-vector angama-491 MB - 500) futhi yenzelwe ukusebenza ngaphansi komthwalo we-CPU futhi kufaka phakathi i-tok2vec, morphologizer, parser, senter, ner, attribute_ruler, kanye nezinto ze-lemmatizer.
Besisebenza ku-spaCy v3.0 isikhathi esingaphezu konyaka, futhi cishe iminyaka emibili uma ubala wonke umsebenzi owenziwe ku-Thinc. Inhloso yethu enkulu ngokwethulwa kwalokhu ukwenza kube lula ukuletha onobuhle bakho e-SPACY, ikakhulukazi amamodeli akamuva njengabaguquli. Ungabhala amamodeli ondla izinto ze-spaCy kuzinhlaka ezinjengePyTorch noma iTensorFlow, usebenzisa uhlelo lwethu olusha lokumisa ukuchaza zonke izilungiselelo zakho. Futhi njengoba ukugeleza kokusebenza kwesimanje kwe-NLP kuvame ukuba nezinyathelo eziningi, kunohlelo olusha lokuhamba komsebenzi oluzokusiza ugcine umsebenzi wakho uhlelekile.
Okunye okusha okusha okuvelele kunguqulo entsha:
Ukuhamba komsebenzi okusha kwamamodeli wokuqeqesha.
Uhlelo olusha lokumisa.
Ukusekelwa kwamamodeli wepayipi asuselwa ku-transformer, alungele ukufundwa kwemisebenzi eminingi.
Amandla wokuxhuma amamodeli wakho usebenzisa izinhlaka ezahlukahlukene zokufunda komshini, njengePyTorch, TensorFlow, neMXNet.
Ukwesekwa kwephrojekthi ukuphatha zonke izigaba zokugeleza komsebenzi, kusuka ekucutshungulweni kwangaphambili kuya ekusetshenzisweni kwemodeli.
Ukusekelwa kokuhlanganiswa neDatha Version Control (DVC), i-Streamlit, i-Weights & Biases ne-Ray package.
Izinto ezintsha ezakhelwe ngaphakathi: iSentenceRecognizer, Morphologizer, Lemmatizer,
I-API entsha yokwakha izinto zakho.
Ekugcineni, uma unesifiso sokwazi okwengeziwe ngakho yale nguqulo entsha noma mayelana ne-spaCy, ungabheka imininingwane Kulesi sixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Kunconyiwe » i-spaCy, umtapo wolwazi wokucubungula ulimi wemvelo
Ubuntu 20.04.2 LTS iza neKernel 5.4, i-graphics stack update, nokuningi
IRaspberry Pi Foundation ifake ngasese ikhosombe leMicrosoft